Home » Creative Writing » စဉ်းစားစရာ အဖြေ Win-Win
ရဟန်းမစားရသော ဆွမ်းတစ်နပ် မဟုတ်လား ဘဘဦးသုခရိုက်တာလေ ဇာတ်လမ်းတိုရှိတယ်။
ခစ်ကာလဂျင်း မတူတာ ထည့်စဉ်းဆားရမည် ပါပါမိုက်။ လအုခေတ် အသိ၊အမြင်မျိုး ဧည့်ဒီခေတ်မှာ ရှိခြင်မှရှိမည်။ ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ဖြစ်ဆင်အရ ဖြစ်လာတဲ့ ယနေ့အသိနဲ့ နှိုင်းယှဉ် မစဂေါင်း။ အုမပါဂျာ… ဟိုဒုံးက ဓါတ်ပုံရုိုက်လျင် ဝိညာဉ်ဖမ်းဆားခံရမည်အထင် ဒဂယ်ရှိဂဲ့ဒယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာဒေါ့ မူလဓါန်းခလေးတောင် ပဲပေးယဂေါင်းမှန်းသိပီ။ လင်ကိုဖျား သားကိုသခင် အယူကိုလည်း သူ့ခေတ်သူ့အခါ ညံမမှီရဂေါင်းလား ပြောမြ။ ပီးဒေါ့ ပုံမှာပြောတဲ့အတိုင်း အခြေအနေ ထပ်တူမကျနိုင်။ မဟော်သထာ ဇတ်မှာ ပတ္တမြား ရေကန်ထဲမှာ မရှိ၊ ထန်းပင်ပေါ်မှာရှိ ဆိုတာ အခုခေတ်နဲ့ဆို သိပ်မထူးဆန်း… ဘာလို့လည်း လူမျိုး၊နိုင်ငံပေါင်းစုံ ကူးလူးဖလှယ် ဆက်ဆံတဲ့ ခေတ်မို့ပါ။ ဖြုန်းကနဲဆိုပီး သဟုတဗ ကျယ်ပြန့်လာဂျသီမှုတ်…။ ပေါယယဉ်ဒေါ့ အကျယ်ဂျီးဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ပါပါမိုက်ကို အနော်ခြစ်တယ်၊ အားကိုးဗျဆေ…
ရုတ်တလျှပ် ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေဂိုလည်း ကျိအူးလေ ပါပါမိုက်…။ ဘုန်းကြီးက ပြေပြေလည်လည် ပြောဂေါင်းပြောမှာပေါ့။ ပီးဒေါ့လှည်း ဘေးမှာ ခုတ်ထစ်ထားတဲ့ သွေးသံရဲရဲ သားတစ်တုံးနဲ့ဆို ကြိုးကြာငှက် အသက်ဘေးကိုပဲ စိုးရိမ်လျှာမှာပေါ့။ မင်းပြစ်ဒဏ် သင့်မှာကြောက်နေတဲ့ လူကို တယားခြလို့ ဖြစ်နိုင်ဗူးထင်တယ်။ ဘုန်းကြီး မယူပါဘူးလို့ပဲ ပြောမှာပေါ့။ ဒါမှ မှုတ်လဲ ငါနဲ့ငှက်ပဲ ကြံခဲ့ပါတယ် ပြောဂေါင်းပြောမဲ။ ပူထူနေတဲ့ ပထိမ်ဆြာက နားဝံဗမှား။ မဆီမဆိုင် ဆွဲထည့်တယ် ထင်မှာပေါစ်။ ကိဆ္ဆအတော်မြှားမြှားမှာ ကာယဂံယှဉ်တွေရဲ့ မိုက်မဲရူးသွပ်မှု ပဓါဏကြဒယ်။ ပြန်ကြည့်ပေါယင်သာ ဟိုလိုမဖြစ်လား ဒီလိုမဖြစ်လား လမ်းဖြောင့်ဒါ။
.မဆွေးနွေးလည်းဖတ်တဲ့အတွက် ကျေးကျေးပါ ကေဇီ
ဦးကြီးမိုက်တွေးသလိုပဲ တွေးမိတယ် ..
ကြိုးကြာကို လည်ညှီးရင် ကိုခမောင်သန့် ဘေ့စ်ဂီတာနဲ့ ရိုက်မှာပေါ့ဗျ…။
ဒီဇာတ်တော် ကိုတော့ တော်တော် ရင်းရင်းနှီးနှီး သိနေတယ်…။
ဒီဇာတ်တော် က ပေးချင်တဲ့ massage က ဒီမှာပါ ခင်ဗျာ…။
တိုင်းပြည်တိုးတက်မယ်..။ လူတဦးချင်းစီ.. အောင်မြင်ကြမယ်..။ Win -Win…
.သူပေးချင်တဲ့ massage ကိုသိပါတယ်ဗျာ..ဒါပေမဲ့ပေးပုံယုတ္တိမကျတော့ခေတ်ကာလသားသမီးများ
ဓမ္မစစ်စစ်တွေကို.. သခ်ျာမတတ်သူတွေက.. သူတို့အိုင်ဒီယာ.. လက်တောက်လောက်လေးတွေလိုက်ဖြည့်ပြီး… ခပ်တည်တည်..ဘုရားဟောဆိုပြီးချည်းကိုင်တုတ်နေသမို့.. ဗုဒ္ဓသာသနာလည်း.. အနောက်နိုင်ငံတွေမယ်.. ရီစရာတွေဖြစ်…။
အဲ့ခေတ်က လူတွေ ဥာဏ်မကောင်းဘူးလို့ပဲ ဖြည့်တွေးရင် တွေး ဒေါ်ဇီဇီ ပြောသလို ချဲ့ကားပြီး ဇာတ်လမ်းဆင်ထားတယ် ပဲ ဆိုဆို..
.အမှန်ပဲကိုဂျက် ရေ :))
.ဇတ်လမ်းအဆုံးမှာ ဂွတ်ရီဇတ်မထွက်တော့ မထေင်္ရကြိုးပမ်းမှုဟာ အားလုံးကိုဒုက္ခရောက်စေပါရောလားဗျ
“Who’s the more foolish: the fool, or the fool who follows him?” ~ Obi-Wan Kenobi
.အိုးလည်းဆုံး ဆိတ်လည်းဆုံး…ခြံစည်းရိုးလည်းကုန်ပေါ့ :))
ကကြီးမိုက်ရဲ့.. ဇတ်က..ပိုဆိုးနေတယ်လို့.. တွေးတောင်မတွေးကြည့်ရဲဖူးမဟုတ်လား..
ဒီပုံပြင်မှာ.. လူတယောက်မှမသေ.. ဆိတ်တကောင်တော့ ဟင်းစားရ.. ငရဲကျတယော်ကမှမသွားရဘူး…ပေါ့..။
.၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလောက်က ကျနော်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Buddha’s Diary…ဗုဒ်ဓဒိုင်ယာရီ စာအုပ်လေး
အရင့် အရင်….ရှေးရှေ့….ခေတ်ဆီက လူတွေရဲ့ အတွေးတွေ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို…
ကျနော် ဖတ်ဖတ်ပြီး..ထိုင် အံ့သြနေမိတာ….
ရဟန်းမစားရသော ဆွမ်းတစ်နပ်ကို သတိရသွားတယ်.. ရဟန်းသရုပ်ဆောင်တာ ဇော်လင်း ထင်ပါ့…
ဟုတ်တယ် အူးမိုက်ရဲ့… အဲဒီဇာတ်တော်တွေ ငယ်ငယ်က သိပ်ကြိုက်ခဲ့တာ.. အခုလိုအချိန် ပြန်ဖတ်တော့ တစ်မျိုးကြီးပဲ.. သိပ်လက်မခံချင်တော့ဘူး…
အနော့်ဂို အကောင်းမြင်စိတ်ထား အားလုံးကို အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ကြည့်လို့ အဆုံးကနေမဒဲ့ လူဂို… ယေရှုခရစ်က အကောင်းမြင်စိတ်ရှိလွန်းလို့ ကားစင်တင် အသတ်ခံရတာလို့ ပြန်ကလန်ခဲ့ဒယ်…. ဆိုင် ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင်
အဲဒီဇာတ်လမ်းက တီဗွီမှာ မကြာခဏလာဖူးလို့ ကြည့်ဖူးတယ်။
ကိုယ်ကြားနာဖူးပြီးသားတရားတော်တွေကိုပဲ မတူတဲ့ရှု့ထောင့်ကမြင်ကြည့်ပြီး ဟောထားတာတွေ တော်တော်ကောင်းတယ်။
.၀င်ဖတ်မန့်ပေးတာကျေးဇူးပါ မမ ခင်ဗျား
ပါပါမှိုက်ပြောတာ ဘာသွားသဒိယလဲဆိုဒေါ့ လူcat အချို့ပြောသလို… ဟာ ဘုရားကကွာ သူ့ခြေမ ကွဲဖို့ ဝဋ်ကျွေးဆပ်ခြင်တာနဲ့ ရှင်ဒေဝဒတ်ကို ထိုးခြတယ်၊ ကျောက်တုံးပိမှ ဖြစ်မည်ဆိုလဲ သူ့တန်ခိုးနဲ့ တောင်ပေါ်က ကျောက်တုံး သူ့အလိုလျောက် ကျလာမည့်အချိန် သိပြီး သွားနေလိုက်ပေါ့။ အခုတော့ဒေဝဒတ် အချောင်မိတယ်။ ဒဂယ်စို သူတွန်းချလည်း အပြစ်မကြီးအောင် ရှောင်ဖို့သင့်တာပေါ့။ အဲလို အဲလို… ပြောသဗျာ။။။
ဧဲလိုပဲ ရှိသေးတယ်။ အခါတပါးမှာ သူဌေးသားတြောက် တရားလာနာတယ်။ ဘုရား စကားမဆုံးခင်မှာ ကိစ္စရှိသေးတယ်ဆိုပီး အချိန်ခေါက်လစ်သွားတယ်။ သူသာ တရားဆုံးအောင် နာလျင် တမဂ်တဖိုလ် ရမည်တဲ့။ ခုတော့သံသရာကြော ပက်လာဘ်မြောပေါ့။ အဲသူက အူးမှိုက်ကြီး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်.. ပြောမြ။ ကြံဖန်တွေးကြေးဆို ဘုရားက သိလျက်နဲ့ ဘာလို့ မတားသလဲ။ တန်ခိုးနဲ့တားလျင်တား ဒါမှမဟုတ် မေတ္တာဓါတ် လွှမ်းခြုံဖမ်းထားလိုက်ပေါ့။။။
နှောက်တခုဂ ဘုရားနဲ့ အမျိုးလည်းတော်တဲ့ အစားကြူးတဲ့ ဘုရင်တပါး ရှိသေးတယ်။ ပသဓနဒီဆိုလား ဘာလား နာမည်မမှတ်မိ။ သိပ်ဝလို့ အစားလျော့ နည်းတောင် ဘုရား ပြပေးခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီဘုရင်ဂျီး ဘုရားဖူးလာရင် မင်းဝတ်တန်ဆာ ငါးပါးကို အပြင်မှာထားပီး ကျောင်းထဲ တရားဝင်နာတုံး သူ့တူက မင်းဝတ်တန်ဆာတွေကို မောင်ပိုင်စီးပီး ဘုရင်လှုပ်လိုက်တယ်။ အဲဒါ ပျံခြဖို့ သူယောက်ဖ တိုင်းပြည်ဆီသွားတာ လမ်းမှာ ဆင်းဆင်းရဲရဲသေတယ်။ အဲဒါလည်း တွေးကောင်းတိုင်းတွေးဂျေးဆို ဘုရားက အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်် ဖြောင်းဖြဖို့ သင့်တာပေါ့။ ဟဲ့ ဗျင်ဂျီး နင့်ကံကုန်တော့ မည်၊ အာဏာ မက်မနေနဲ့.. ဘွကူးကောင်းဖို့ လှုပ်ဆိုပီးဒေါ့…
.ကျုပ်နားလည်တာက ဗုဒ္ဓ က ဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်
အနော်ပေါလိုဒါ ကံကြမ္မာလဲဟုတ်ဝူး၊ ဖမ်စင်းယှဉ်လည်း ဟုတ်ဝူး…။ ကိုယ်ညံတထွာလောက်နဲ့ တွေးကောင်းဒိုင်း တွေးစကြံဆည်တာကိုပေါသာ..။ အဲဒါနဲ့ပဲ မရှိတွေ အရှိဖြစ်.. အမှားတွေ အမှန်ဖြစ်တယ် ပါမိုက်.. ခြစ်လို့ပေါဒယ်မှက်ပါ။
ကံကိုအဲလောက်ယုံကြည်တယ်ဆို.. ချီးပုံနင်းကြည့်ပါလား.. ကကြောင်..
“အပါယ်ဘုံမှာ အကျိုးပေးတဲ့ အကုသိုလ်ကံ” တဲ့.. အကုသိုလ်ကံ”၁၀”မျိုးထပ်ရှိသဗျ..။
မယုံနင်းကြည့်… ခွေးချီးပုံလို့.. ပြောရမှာပါပဲ..။
ဝင် မန့်မလို့ လုပ်ရင်း